ukujongana: fumana i-32gb iphone 6 ngenkonzo ehlawulelwa kwangaphambili ye $ 199.99
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Deal: Fumana i-32GB ye-iPhone 6 ngenkonzo ye-AT & T ehlawulelwa nge- $ 199.99
Deal: Fumana i-32GB ye-iPhone 6 ngenkonzo ye-AT & T ehlawulelwa nge- $ 199.99
& Apos; mhlawumbi inyanga kude kude nokutyhilwa kwe ii-iPhones ezintsha , Kodwa ezo & iiapos zanele ukujongana nezinye ii-smartphones ezindala zeApple. Ukuba ubungazi, Ukuthenga okungcono kuqhuba ukunyuswa kwi-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus, kodwa abathengi banokufumana ezinye ii-Apple kunye neeapos zePads ngamaxabiso angcono.
Kodwa ukuba awunakho ukufikelela kwi-iPhone 7 okanye i-7 Plus, nokuba baphucule, nantsi enye into kwimodeli ye-iPhone endala enokuthi ilingane nohlahlo-lwabiwo mali. I-iPhone 6 iyathengiswa okwexeshana kwi-Best Buy apho abathengi banokuyifumana nge- $ 199.99 nje.
Ukusukela IPhone 6 uhlala uthengisa malunga ne-300 yeedola, wena kunye ne-apos; uya kuba ugcina i-100 leedola xa uthenga i-iPhone 6 nge-Best Buy. Kukho ukubanjwa nangona, njengoko i-Best Buy ithengisa kuphela uhlobo lwe-AT & T oluhlawulelwa kwangaphambili lwe-iPhone 6 32GB (Space Grey).
Ukuba uthatha isigqibo sokuya kwisivumelwano ngeyona nto ithengiweyo yokuthenga, unokufuna ukujonga ngokupheleleyo Uvavanyo lwe-iPhone 6 ngeenkcukacha ezithe kratya malunga neApple & apos; s smartphone.
Thenga i-iPhone 6 ene-32GB ngokuthenga okungcono
Ungasisebenzisa njani isixhobo sokukhupha isixhobo
Uvavanyo lobomi bebhetri ye-galaxy s6
UGoogle wongeza upelo kunye nokulungiswa kwegrama entsha kwi-app ye-Gmail
Ilitye lentloko: Ukwandiswa kweKobolds kunye nokwandiswa kwamangcwaba kuza kuqaliswa ngoDisemba 7
IXfinity Imfonomfono ixilongo iVerizon, i-AT & T, kwaye ewe, nkqu neT-Mobile ngesivumelwano sayo esitsha esingenamda se5G
Ungayiseta njani i-iPhone yakho njengendawo ene-Wi-Fi ephathekayo
Idili: Ukuthenga okungcono kukuthengisa iAmazon Echo (2nd gen) kunye nezithethi ezihlakaniphile zeEcho Dot ngamaxabiso oLwesihlanu oMnyama